Passbook मार्फत इभोलि। पुश गर्नुहोस् Martech Zone
मैले भर्खरै प्रयोग गर्न शुरू गरें पासबुक मेरो आईफोनमा स्टारबक्स भ्रमण गर्दा। यद्यपि म आफ्नो मा गर्व छु स्टारबक्स गोल्ड कार्ड, म एक कार्ड द्वारा मेरो वालेट को मोटाई कम गर्न धेरै खुसी छु। मैले भर्खरै मेरो फोन ब्यारिस्टामा दिएँ र उनीहरूले मेरो पुरस्कार कार्ड स्क्यान गर्न सक्नेछन्। स्टारबकको अनुप्रयोग प्रयोग गरेर, म मेरो फोनबाट पनि मेरो कार्ड पुन: लोड गर्न सक्दछु।
नेक्स्ट वेबले हालसालै एक गर्यो Passbook को बारेमा सबै पोष्ट गर्नुहोस् र कसरी व्यवसाय बोर्ड मा उफ्रिनु पर्छ, तर पोष्ट मा एक टिप्पणी वास्तव मा मेरो ध्यान आकर्षित। किनभने एप्पलले यसको सूचना सेवाको साथ एकीकृत पासबुक, व्यवसायहरू यसको प्रयोक्ताहरूलाई सजीलै अपडेटहरू धकेल्नको लागि एक प्रीमियम अवसर बन्छ।
यहाँ लेखमा जिम पासेलको टिप्पणी छ, यो लगानीमा सबैभन्दा ठूलो फिर्ताको व्याख्या गर्दै:
मेरा प्रत्येक ग्राहकहरु जसले मेरो एक पास पार गरे, नयाँ अफरको साप्ताहिक अपडेट प्राप्त गर्दछ। तिनीहरूको पास ताजा वा तिनीहरूलाई सूचित। वा म तिनीहरूलाई आउने बिक्रीको घोषणा, वा स्टोर म्यानेजरबाट व्यक्तिगत नोट वा केही पनि पठाउँछु। त्यसैले मेरो पास उनीहरूको वालेटको शीर्षमा रहन्छ र उनीहरूसँग कुराकानी गर्न मेरो च्यानल बन्छ। तिनीहरू स्थायी ग्राहक बन्छन्, यद्यपि उनीहरूले कूपन-क्लिपर मात्र सुरु गरेको हुन सक्छ।
सामना गरौ। इनबक्स स्प्याम फिल्टर मुद्दाहरूको समस्याले ग्रस्त छ र उपभोक्ताहरू ईमेल मार्केटिंगको लागि सुन्न भएका छन्। जबकि ईमेलको कम लागतका कारण अझै लगानीमा अविश्वसनीय रिटर्न रहेको छ, ध्यान पाउनु भनेको बढ्दो समस्या हो। टेक्स्ट सन्देशन अर्को शानदार पुश टेक्नोलोजी हो, तर उपभोक्ताहरू प्राय: पहुँचमा आफ्नो फोन नम्बर सदस्यता लिन र जारी गर्न हिचकिचाउँछन्। मोबाइल अनुप्रयोगहरू र अनुप्रयोगहरूमार्फत पुश सूचनाहरू जस्तै पासबुक तपाईंको सब भन्दा राम्रो हुन सक्छ पुश मार्केटिंग अवसर।
हामीले छलफल पनि गरेका छौं Geofencing, निकटतामा आधारित मार्केटिंग रणनीति जसले SMS (पाठ सन्देश) वा ब्लुटुथ मार्केटि incor समावेश गर्दछ। एकचोटि तपाईंको मोबाइल उपकरण दायरामा आयो, तपाईं सूचनाहरू धक्का दिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, Passbook ले पनि एक रणनीतिको रूपमा भौगोलिक स्थान प्रदान गर्दछ। तपाईं शाब्दिक एक पास अपडेट धक्का सक्नुहुनेछ जब कुनै निश्चित भौगोलिक निकटता भित्र आउँछ। सबै भन्दा राम्रो, तपाइँलाई यसको समर्थन गर्न कुनै थप टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्दैन किनकि यो मोबाइल जियोलोकेशन सेवाको ठीक बन्द निर्माण गरिएको छ।
किनकि Passbook लाई पहिले नै टिकट, बोर्डि pass पास, कूपन वा वफादारी कार्यक्रमको दर्ता आवश्यक पर्दछ, यी पनि तपाईका सबै भन्दा व्यस्त प्रयोगकर्ताहरू हुन्। तिनिहरु पहिले नै सक्रिय संग तपाइँको कम्पनी संग एक सम्बन्ध को पछ्याइसकेका छन्। र समर्थन आईओएस उपकरणहरूमा सीमित छैन, एटिडो मोबाइलको विकास भएको छ पासवालेट, एक एन्ड्रोइड अनुप्रयोगले मानक पास प्याकेट पनि सेवा गर्दछ।
नेटिभ लाइब्रेरीको प्रयोग गरेर तपाईको आईओएस अनुप्रयोगको साथ तपाई आफ्नै पास विकास गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाई जस्तो एसडीके प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पासलोत। तेस्रो पक्षको विकास र व्यवस्थापन कम्पनीहरु समावेश वालेटकिट, पासडक, PassTools, PassPages, पासरोकेट र पासकिट.
टैग: भौगोलिक स्थानमोबाइल टेक्नोलोजीहरूपारितपासबुक एप्पल पासबुकपासडकपासकिटपासप्सपासरोकेटपासस्लटपासवाललेटपुश मार्केटिंगटेक्नोलोजीहरूवालेटकिट
मनोविज्ञान प्रयोग गरेर आगन्तुकहरूलाई रूपान्तरण गर्ने १० तरिकाहरू
गुगल नक्शामा तपाईंको फ्लोर योजना जोड्नुहोस्
म PassTools को संस्थापक/CEO हुँ, र हामी उदीयमान पास निर्माण स्थानका नेताहरू मध्ये एक हौं। हामीलाई पनि तपाइँको सूचीमा समावेश गरी तपाइँको कदर गर्दछु।
भयो! धन्यवाद जो!
राम्रो लेखिएको टुक्रा डगलस!
म Vibes मा उत्पादन टोलीको नेतृत्व गर्छु (http://www.vibes.com), एक मोबाइल मार्केटिङ टेक्नोलोजी कम्पनी जसले ब्रान्ड र खुद्रा बिक्रेताहरूसँग आफ्ना ग्राहकहरूसँग तत्काल र दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउन काम गर्छ। हामीले Passbook मा अलिकति बाजी लगाइरहेका छौं, पहिले नै हाम्रो प्लेटफर्ममा पास जीवनचक्र व्यवस्थापन क्षमताहरू (सिर्जना - वितरण - व्यवस्थापन - विश्लेषण - पुन: लक्ष्य) एकीकृत गरिसकेका छौं। हामीले पासबुक बिटा कार्यक्रम सुरु गरेका छौं र धेरै ठूला, राष्ट्रिय ब्रान्डहरू छन् जुन तिनीहरूको फराकिलो मोबाइल मार्केटिङ रणनीतिको भागको रूपमा पासबुकको क्षमताहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्।
म पासबुकको बारेमा तपाइँको उत्साह प्रतिध्वनित गर्न चाहन्थें। मलाई विश्वास छ कि यसले ब्रान्डहरूले आफ्ना वफादार र कहिलेकाहीं-वफादार ग्राहकहरूसँग संलग्न हुने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नेछ। र यसले पहिले नै गुगललाई उनीहरूको गुगल वालेट रणनीति पुन: विचार गर्न धकेल्यो।
राम्रो लेख, र पास विकास विकल्पहरूमा साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद। उपभोक्ता र मार्केटर दुवैको लागि मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै, यो अचम्मको कुरा हो कि धेरै धेरै कम्पनीहरूले पासबुकमा आफूलाई थप्न बोर्डमा हाम फालेका छैनन्। तपाई सहि हुनुहुन्छ, यो उपभोक्ताको लागि अति सुविधाजनक छ (iPhone5 खरिद गरेदेखि नै मैले आफैंले Starbucks एप प्रयोग गरेको छु), र पक्कै पनि आजको जानकारी-थकित श्रोताहरूका लागि बजारको लागि धेरै प्रभावकारी तरिका जस्तो देखिन्छ। पासबुकमा सामेल हुने थप व्यवसायहरू, र मेरो वालेटमा प्लास्टिकबाट छुटकारा पाउनको लागि उत्सुक छु।
जनवरी 17, 2013 मा 6: 14 एएम
महान लेख डगलस र उल्लेख को लागी धन्यवाद।
पुश क्षमता सम्भवतः पासबुकको सबैभन्दा मूल्यवान विशेषता हो। हाम्रा ग्राहकहरू र साझेदारहरू सधैं प्रभावित हुन्छन् जब उनीहरूले पहिलो पटक लक स्क्रिन सन्देश र 'सर्कलिङ अपडेट' अनुभव गर्छन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायमा पासबुक पासहरूलाई अझ राम्रोसँग एकीकृत गर्न र आफ्ना ग्राहकहरूसँग संलग्न हुन मद्दत गर्छ। अर्थात् तिनीहरूले स्थिर कुपन वा वफादार कार्डको डिजिटल प्रतिस्थापन मात्र लागू गर्दैनन्।
अब जो कोहीले पनि यो 'पुश अपडेट' अनुभव गर्न सक्छन्। हाम्रो गृह पृष्ठबाट 'AbraKebabra' पास डाउनलोड गर्नुहोस् र पास अपडेट URL मा लिङ्क गर्न पासलाई फ्लिप गर्नुहोस्। यो द्रुत भिडियोले यो कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
यदि तपाईंले पासबुक पुशको अनुभव गर्नुभएको छैन भने यो राम्रोसँग चलाउन लायक छ; र जब AbraKebabra नमूना पासले ब्यालेन्स अद्यावधिकलाई चित्रण गर्दछ, सम्भावनाहरू असीमित छन् (जस्तै कुनै पनि क्षेत्र अद्यावधिक गर्न सकिन्छ र 'पुश' गर्न सकिन्छ)